RLBox, ilay haitao vaovao fitokana-monina fitahirizam-boky ampiasain'i Mozilla | Avy amin'ny Linux
Mpikaroka ao amin'ny Oniversite Stanford, la University of California amin'ny san diego y la University of Texas any Austin Nivoatra izy ireo andiana fitaovana nomen'izy ireo ny anarana "RLBox", de dia azo ampiasaina ho ambaratonga fanampiny an'ny insulate hanakanana ny faharefoana amin'ny tranombokin'ny asa.
RLBox dia mikendry ny hamaha ny olan'ny fandriam-pahalemana amin'ny tranombokin'ny antoko fahatelo tsy atokisana izay tsy fehezin'ny mpamorona, fa ny marefo izay mety hilefitra ny tetikasa lehibe.
Mozilla dia mikasa ny hampiasa RLBox amin'ny tranokala Firefox 74 ho an'ny Linux sy ny fanangonana ny macOS ao amin'ny Firefox 75 mitokantokana ny fanatanterahana ny tranomboky Graphite, izay tompon'andraikitra amin'ny fisolo tena ireo loharano.
Mandritra izany fotoana izany, ny RLBox dia tsy voafaritra manokana amin'ny Firefox ary azo ampiasaina hanokanana ireo trano famakiam-boky amin'ny tetikasa tsy ara-dalàna.
Momba ny RLBox
Ny rafitra miasa RLBox dia manjary mamorona kaody C / C ++ avy amin'ny tranomboky mitokana mankany amin'ny kaody WebAss Assembly antonony ambaratonga ambany, izay navoaka ho modely WebAss Assembly, ny fahefany dia natao hamatotra an'ity maodilo ity fotsiny (ohatra, ny famakiam-boky ho an'ny fikirakirana tadiny dia tsy afaka manokatra takelaka na rakitra tambajotra) C / C ++ code conversion a WebAss Assembly dia vita amin'ny fampiasana wasi-sdk.
Ho an'ny famonoana mivantana, ny maody WebAss Assembly dia natambatra ho kaody milina mampiasa ny mpametaka Lucet ary mihazakazaka amin'ny "nanoprocess" misaraka amin'ny fahatsiarovan'ny fampiharana azy. Ny mpandrindra Lucet dia mifototra amin'ny kaody mitovy amin'ilay motera Cranelift JIT ampiasaina ao amin'ny Firefox hitantanana WebAss Assembly.
Ny maodely mivondrona dia miasa amin'ny faritra fitadidiana hafa ary tsy manana fidirana amin'ny sisa amin'ny habaka adiresy. Amin'ny tranga fitrandrahana ny marefo ao amin'ny tranomboky, ny mpanafika dia ho voafetra ary tsy afaka miditra amin'ny faritra fahatsiarovan-tena amin'ny dingana lehibe na hamindra ny fifehezana ivelan'ny boaty fasika.
API avo lenta no natokana ho an'ny mpamorona, ahafahanao miantso ny asan'ny tranomboky amin'ny fomba mitokana.
ny Ireo mpanara-maso WebAss Assembly dia tsy mila loharano fanampiny fanampiny ary ny fifandraisana amin'izy ireo dia tsy dia miadana kokoa noho ny fiantsoana asa mahazatra (ny asan'ny tranomboky dia mihazakazaka amin'ny endrika kaody teratany, ary ny fihoaram-pefy dia tsy miseho afa-tsy rehefa maka tahaka sy manamarina ireo angon-drakitra mandritra ny fifampiresahana amin'ny tontolo misy sandbana)
Ny fiasan'ny tranomboky mitokana dia tsy azo antsoina mivantana, ary raha te hiditra amin'izy ireo ianao dia mila mampiasa ilay sosona invoke_sandbox_unction ().
Ho setrin'izany, raha mila miantso fiasa ivelany avy amin'ny tranomboky izy ireo, ireo fiasa ireo dia tsy maintsy faritana mazava tsara amin'ny alàlan'ny fomba register_callback (amin'ny alalàn'ny default, RLBox dia manome fidirana amin'ireo asan'ny tranomboky mahazatra).
Mba hiantohana ny fandidiana fahatsiarovana azo antoka, tsy ampy ny fanakatonana kaody fanatanterahana kaody ary koa mila manome fanamarinana ireo renirano data niverina ianao.
Ny soatoavina namboarina tamina tontolo mitoka-monina dia voamarika ho tsy azo atokisana, voafetran'ny tag misy loko, ary mitaky fanamarinana sy kopian'ny fahatsiarovana fampiharana ho an'ny "fanadiovana".
Raha tsy misy fanadiovana, ny fiezahana hampiasa angon-drakitra maloto ao anaty tontolon-kevitra izay mitaky angon-drakitra mahazatra (sy ny mifamadika amin'izany) dia mitarika amin'ny famoronana hadisoana amin'ny dingana fanangonana.
Ny adihevitra momba ny asa kely, ny sanda miverina ary ny rafitra dia ampandalovina amin'ny alàlan'ny fanaovana kopia eo anelanelan'ny fahatsiarovana sy ny fitadidiana boaty fasika. Ho an'ny angon-drakitra lehibe dia atokana ao anaty tontolo mitokana ny fahatsiarovana ary averina amin'ny fizotrany lehibe ny tondro iray "referansa boaty" mivantana.
Ny fivoarana RLBox dia zaraina eo ambanin'ny fahazoan-dàlana MIT. RLBox dia manohana Linux sy macOS amin'izao fotoana izao ary antenaina fa hifanaraka amin'ny Windows izy io aorian'izay.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity haitao vaovao kasainao ampiharina ao amin'ny Firefox ity i Mozilla dia azonao atao ny mijery ny fivoarany sy manandrana ny API Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » RLBox, ilay haitao vaovao fitokana-monina fitahirizam-boky ampiasain'i Mozilla